समाचार « Nijamati Khabar
Published On : 28 February, 2020 12:04 pm
काठमाडौं, १६ फागुन । शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य सामान्य ओराले झरेको छ । बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार तोलामा ५ सय घट्दै आरालो लागेको हो । शुक्रबार ७९ हजार २ रुपैयाँमा
Published On : 27 February, 2020 4:20 pm
काठमाडौं, १५ फागुन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा चर्किएको विवादबीच अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडाले नै निरन्तरता पाउने भएको छ। यही फागुन २० गतेदखि उनी राष्ट्रियसभाको सदस्यका रुपमा रहने छैनन् ।
Published On : 27 February, 2020 4:02 pm
काठमाडौं, १५ फागुन । बिहीबार सेयर बजारले नयाँ उचाइ लिएको छ। साताको अन्तिम दिन बजारमा ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च अंक हो ।
Published On : 27 February, 2020 11:56 am
काठमाडौं, १५ फागुन । बिहीबार अमेरिकी डलरलगायत सबै विदेशी मुद्राको भाउ घटेको छ । नेपाल राष्ट्रबै‌ंकले बिहीबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ९६
Published On : 26 February, 2020 11:57 am
सस्तियो सुन !
काठमाडौं, १४ फागुन । सुनको भाउ बुधाबार तोलामा पाँच सय रुपैयाँले सस्तो भएको छ । सुन तोलाको ७९ हजार पाँच सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।